Ha’yadda Kaalo oo 25 Carruura agabyada waxbarashada gudoonsiisay -Dhagayso | Puntland Today
Ha’yadda Kaalo oo 25 Carruura agabyada waxbarashada gudoonsiisay -Dhagayso
Dalkeena Soomaaliya Bur burkii ku dhacay waxay saameeyeen dhamaan adeegyadii bulshada, waxaana meesha ka baxay in dad badan oo Soomaaliyeed ay helaan adeeg ku filan, hal qaar kale ay aysan helinba nolol ku filan.
Carruurta Soomaaliyeed waxay ahayeen kuwa ugu badan oo dhibaatada dalka ka dhacday saamaysay, waxay qaarkood waayeen waalidkii dhalay, kuwaas oo dantu biday darbi jiif nimo, Halka kuw kale ay waayeen cid ku gacan siisa nolosha ay ku nool yihiin asaagood.
Waalid badan waxay awoodi waayeen inay ilmahooda waxbarasho geeyaan si ay u anfacaan iyaga iyo ummadda kale Soomaaliyeed, mana helin cid ka caawisa.
Deegaanada Puntland oo iyagu ka nabad galay dagaaladii Sokeeye ee dalka ka dhacay , waxaa ku nool Carruur badan oo aan helin adeegyada waxbarashada , waxay Carruurtaas isugu jiraan kuwa waalidkood ku dhinteen dagaaladii dalka ka dhacay, iyo kuwo Waalidkood u awoodi waayeen inay geeyaan dugsiyada waxbarashada.
Ha’yadda Kaalo oo ah ka shaqaysa gudaha dalka ayaa Maanta 25 Carruura gudoonsiiyey bugaag iyo agab kale ee waxbarashada , kuwaas oo Maamulayasha Iskuulada qaarkood soo arruuriyeen , waxayna sidoo kale ballan qaadeen inaysan wax lacag ah ka qaadayn.
Nuur Shire Cismaan oo ah madaxa Mashaariicda Ha’yadda Kaalo ayaa horay u billaabay barnamaijkiis si iskiisa, wuxuu Iskuulad ku daray Carruur iyagoo aan wax lacag ah laga qaadin.
Xarunta gudoonka waxbarashada gobolka Nugaal ayaa Carruurta lagu gudoonsiiyey agabka, waxaa goob jooga ahaa gudoonka waxbarashad gobolka .